Allgedo.com » 2013 » February » 03
Home » Archive Daily February 3rd, 2013
Ugaaska beesha Sade ee gobolka Gedo Ugaas Maxamed Ugaas Cumar oo ka Tacsiyeeyey Geeridii Suldaan Sokor
Inaa lilaahi Wa-inaa ilaahi Raajicuun. Waxaan halkaan Tacsi tiiraanyo xambaarsan uga dirayaa dhamaan umadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shacabka aan walaalaha nahay ee ku dhaqan gobolada Jubooyinka oo dhawaan si lama filaan ah uu Suldaankoodii Suldaan Cabdi Cali Sokor ku geeriyooday magaalada Nairobi. Anigoo ku hadlaya magaca beesha Sade Daarood waxaan marxuumkaas alle subxaanahu watacaalaa...
Baaq Taageero Maamul u samaynta Gobolada Jubbooyinka
Waxaan taageeraynaa isla markaasna si aan hagar lahayn u soo dhawaynaynaa dhawaaqa iyo kacdoonka ah in G/Jubbooyinka maamul iyo nadaam iyo kaladanbayn loosameeyo. Sade iyo soomaaliwaynbo maanta waxay u baahantahay nabad Waxaa layiri tuke caanaha waa arkaa laakiin madhamo, mudanayaal iyo warwooyin alle aan ka baqno 22 Sano ayaan dabo taagnay kuwo aan nadaam iyo maamul midna noohorseedayn halaag iyo...
Maamul u samaynta gobolada Jubbooyinka dadka deegaanka ayey u taalaa
Goboladaan la isku yiraahdo Jubbooyinka waxaa ay soo mareen marxalado kala duwan oo wax wayn ka badalay noloshii dhaqan-dhaqaale ee dadka deegaankaan. Isabadalaas oo ay sababeen dagaalo sokeeye oo dadka shacabkaan aysan horay u baran. Colaadahaas sokeeye ee isbadalka keenay dhinanacyada dhaqanka iyo dhaqaalaha waa mid aysan dadkani horay u aqoonin. Hadaan waxyar ka taabto isbadalaas dhinacyada badan...
Ra’isal Wasaaraha oo Maanta la kulmay Agaasimayayaasha Wasaaradaha.
Ra’isal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa xafiiskiisa kula kulmay Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaraddaha Dowladda, isaga oo kala hadlay sidii loo dardargeli lahaa howlaha Dowladda iyo sidii isbedel cusub oo deg deg ah kuna dhisan Horumar loo sameyn lahaa. Ra’iisal Wasaaraha ayaa ku tilmaamay ujeedada kulankan maanta ee Agaasimeyaasha Wasaaradaha inuu...
Qarax geystay Khasaaro oo ka dhacay degmada Wajeer ee Kenya iyo Ciidamo Tababar loogu soo xirey Dalka Ugandha.
Wararka naga soo gaaraya Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in Xaley goor dambe degmadaasi uu ka dhacay weerar khasaaro Geestay,inkastoo ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogaanin Cida ka dambeysay Qaraxaasi. Qof sitey walxaha Qarxa ayaa la tilmaamayaa in ay ku qarxeen walxihii uu sitay ee qaraxa dhaliyay iyadoo inta la ogyahay uu isaga Ku geeriyooday islamarkaana ay...
Jaaliyada Soomaaliyeed ee Dalka UK oo Xaflad soo dhaweyn ah u sameysay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wafdigiisa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xassan Shiikh Maxamuud iyo Marwada kowaad Qamar Cali Cumar iyo wefdi ka socda Dowladda Fedraalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingriiska. Xubnaha ku weheliyey kulanka ballaran ee xalay ka dhacay magaalada London waxaa kamid aha Raysalwasare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha dibadda Marwo Fawsiya...
Alle Ha u Naxariistee Suldaan Cabdi Cali Sonkor oo lagu Aasey Magaalada Kismaayo .
Waxaa shaley Galab aas loogu sameeyey magaalada Kismaayo Suldaan Cabdi Suldaan Cali Sonkor oo ka mid ah salaadiinta sida weyn looga yaqaano Gobolada Jubooyinka ee Koofurta Soomaaliya, isla markaana wax badan ka geystey Qaranimada Soomaaliya iyo sidii dowlad rasmi ah ay u noqon lahayd. Aaska Suldaanka waxaa ka qeybgalay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Isgaarsiinta, Boostada iyo Gaadiidka Xukuumadda...
Maamulka Degmada Marka oo ka Hadlay Amaanka guud ee Degmadaasi.
Maamulka Degmada Marka ee xarunta Gobalka Shabeelaha hoose ayaa ka hadlay ammaanka Magaaladaasi xilli dhawaan uu booqday Degmadaasi Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka tirsan Golaha wasiirada. Guddoomiye ku xigeenka dhanka arimaha Bulshada ee Degmada Marka ahna ku simaha Guddoomiyaha Degmada C/laahi Muuse oo warbaahinta kula hadlay Marka ayaa sheegay in ammaanka Magaalada uu yahay mid wanaagsan...
Xarakada Alshabaab oo sheegtay in ay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan Ciidamada Jabuuti
Ururka Al-Shabaab ayaa ka hadlay dagaal duleedka Magaalada Beladweyne ee Gobalka Hiiraan ay kula galeen ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Gobalkaasi. Afhayeenka dhanka dagaalada ee Ururka Al-Shabaab Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in weerarka dagaalka ah ay ka dambeeyeen Ururka Al-Shabaab ayna ku qaadeen fariisin ciidanka Jabuuti ay...
Caado Dhaqameedka Ciyaarta Istunka oo Sanado ka dib laga Bilaabay Afgooye.
Muddo afar sano kadib ah ayaa waxaa Magaalada Afgooye ee Gobalka Shabeelaha hoose ka biloowday caado dhaqameedka istunka oo shacabka reer Afgooye aysan muddo sameyn. Cabdulaahi Axmed Cabdi Iidoow oo ah Guddoomiyaha Degmada Afgooye ee Dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in caado dhaqameedka istunka ay tahay arin ay sameyn jireen shacabka Degmada Afgooye iminkana dib loosoo...